I-OTK- M1 500W ibhayisikili elijwayelekile le-Urban Electric Cargo, i-China OTK- M1 500W Abakhiqizi bebhayisikili abajwayelekile base-Urban Electric Cargo Bike, abahlinzeki, iFektri - iTravel Delight (Changzhou) Ebike Co., LTD
Ibhayisikili le-OTK- M1 500W elijwayelekile le-Urban Electric Cargo
Imoto: 48V-500W Ibhethri: 48V 11.6AH Ukuboniswa: I-LCD
I-Max Speed: 25km / h Ibanga: 50-70km Shaja: 5-6h
Ukukhanya: I-LED Umthwalo: 200kg Isisindo: 43kg
Udinga ibhayisikili lezimpahla ngenhloso yokuhamba noma yokusetshenziswa? Ngabe uhlose ukuba nokuthile okwenzelwe ngokwemvelo ukuletha impahla noma izingane zakho? Amabhayisikili kagesi angukukhetha okuvelele kwezinto zokuhamba ongaya kuzo lapho uya khona ngokushesha kunokusebenzisa imoto kuthrafikhi eminyene kakhulu.
I-OTKARGO M1 ibhayisikili kagesi elenzelwe imithwalo, uhlobo olujwayelekile lunamandla, lunezinto ezingcono nama-motors, ngakho-ke ungayigibela noma yikuphi ngaphandle kokukhathazeka ngokulahlekelwa uhla. Ibhayisikili le-500W hub motor cargo lakhiwe ngebhethri le-48V 11.6Ah Lithium-Ion elenzelwe umthwalo owedlulele nokugibela isikhathi eside. I-7-speed Shimano drivetrain namabhuleki e-disk disc ahlinzeka ngozinzo nokuhamba kahle.
Izici eziphumelela kakhulu zebhayisikili yi-pedal-assist yekhono lokushayela elingenamandla. Inebanga elifinyelela ku-50km. Ngokuya ngekhwalithi kanye ne-spec, yibhayisikili yezimpahla zikagesi engcono kakhulu futhi engabizi kakhulu ongayithenga. Ibhayisikili lomndeni kagesi elifanele kanye nebhayisikili lokulethwa kagesi ezinkampanini.
JIKELELE UHLELO LOKHETHO DIMENSION
UMax.speed I-25 km / h (i-EU) motor 500W ubude 234cm
Ibanga Cishe ama-50-70KMS Khombisa I-LCD ububanzi 42cm
Ukulayisha okuningi 200KGS Battery 48V 11.6AH Ukuphakama 90cm
Isikhathi sokushaja I-5-6H
Isondo langaphambili 20 ``
Isondo elingemuva 26 ``